I-China KingKong 3 Tattoo Cartridge Machine Ukwakha kanye nefektri | MOLONG
Imoto yaseJalimane engenasisekelo
Ijubane Lokujikeleza: 12V 11000rpm
480 torque enkulu
I-AIR FREIGHT: Indlela enhle yokuthumela ukuthunyelwa okulingene (ngaphezu kuka-100kg) noma lapho umugqa wakho wesikhathi ungeke ulinde ukuthuthwa kwempahla olwandle. Amanani wezimpahla zomoya asuselwa kusisindo nevolumu. Ezinye izinto ezifana negwebu zithatha isikhala esiningi kepha zilula kakhulu futhi ezinye izinto ezifana nensimbi zisinda kakhulu kepha zithatha isikhala esincane. Izindleko zangempela ezithwala impahla zithatha isisindo nevolumu kokubili ukucatshangelwa. Ngokuvamile, isikhathi sokuhamba asisadluli izinsuku eziyi-10 zokusebenza futhi imvamisa kuphela izinsuku eziyi-3-5. (Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ukuthuthwa kwempahla kungukulethwa nje esikhumulweni sezindiza esiseduze nawe. Umenzeli wakho wezimpahla usazodinga ukusingatha imvumo yamasiko nezinto zokuhamba zangaphakathi ezweni eziya endlini yakho yokugcina impahla). I-Air Waybill (AWB) ingubufakazi obubhalwe phansi besivumelwano esiphakathi kuka-EM nomphathi. I-AWB izolethwa nempahla yomoya futhi isebenza njengeresidi yokulethwa, ifomu le-invoyisi, isitifiketi somshuwalense kanye nedokhumenti edingekayo yokuvunyelwa kwamasiko.
UKUTHWALA NGOLWANDLE: Indlela ebiza kakhulu futhi ehamba phambili yokuthumela amabhizinisi wokungenisa nokuthekelisa emhlabeni jikelele. Singakwazi ukuhlela ukuthunyelwa kusuka efektri yethu, kusuka ethekwini lethu eliseduze shanghai, kuya ethekwini eliseduze nawe, noma yonke indlela eya ezikhungweni zakho (kungafaki intela nentela). Singathumela imithwalo egcwele yeziqukathi (i-FCL) noma ngaphansi kwemithwalo egcwele yesitsha (i-LCL). Amanani esitsha se-40 "cishe angama-50% ngaphezulu kwesitsha se-20" futhi i-40 "HQ icishe ilingane nentengo ye-40" GP. Max umthwalo cishe 20 amathani. Abathengisi bethu bangakweluleka ngamathiphu wokuthumela. Isibonelo, uma ungaphansi kuka-8cmb sizokweluleka ukuthi uthumele nje i-LCL. Uma ungaphezu kuka-15cbm ungacabanga ukuthenga okuningi ukulayisha isitsha esigcwele ngoba indlela eshibhe kunazo zonke kuzoba ukuthumela i-FCL noma kunjalo. Isisindo / ivolumu ephansi ekhokhwayo ye-LCL yi-1 cbm noma i-1 ton, ngakho-ke kuma-oda angaphansi kuka-100kg singahle siphakamise ukuthi kuthuthwe izindiza noma ukuthunyelwa kwemikhumbi.
Ukuhamba olwandle kuhamba kancane ngakho ukuhlela okufanele kubalulekile. Siphakamisa ukufaka ama-oda ezinyangeni ezintathu ngaphambi kwesikhathi. Ngokwesibonelo. Uma udinga izimpahla zakho zilungele isikhathi sikaKhisimusi, kungcono ubeke i-oda lakho ngo-Agasti noma ngisho nangaphambi kwalokho. Futhi ungahlukanisa ukuthunyelwa kwakho kube izingxenye ezimbili: amaphesenti amancane ngomoya, ukuphumula ngolwandle.
Ukusula nokuqoqa noma ukulethwa kwe-oda lakho kungenziwa ngumthengi noma umthengisi wamasiko. Uzobopheka ukufaka amadokhumende wokufaka kumasiko, uhlele ukukhokhwa kwanoma iyiphi intela, intela nezinye izimali. Ngokuya ngezwe, kungakhohlisa; ngakho-ke siphakamisa ukuthi kusetshenziswe abathengisi abangokwezifiso ukuze bathole usizo. Sizokunikeza iBill of Lading, Invoice, iSitifiketi Sokuqala, kanye nohlu lokupakisha. Hlola njalo ukuqinisekisa ukuthi imininingwane iphelele futhi inembile futhi uyidlulisele kubathengi bakho bamasiko ngokushesha okukhulu.
Langaphambilini Izeluleko Zesiphepho Esimhlophe Esilahlwa NgePlastiki
Olandelayo: I-Tattoo Height Adjustable Black Arm Rest Stand
5PCS & 3PCS Ukubhoboza Forceps Tattoo Pierci ...
1pc Tattoo Ubuhlalu Ball Grabber 4 Uzipho Engagqwali S ...